नोर्माण्डी को क्षेत्र फ्रान्स को पश्चिमोत्तर भाग मा स्थित छ र एक अपेक्षाकृत छोटो यात्रा पेरिस टाढा छ. यो उत्तरी फ्रान्सको सार अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ कि एक लोकप्रिय यात्रा ती मध्ये धेरै को लागि गन्तव्य हो. नोर्माण्डी यो सबै छ, एक देखि धनी इतिहास कि मिति शताब्दीयौंदेखि फिर्ता, अचम्मको परिदृश्य र उत्कृष्ट भोजन तपाईं चाहने थप छोड्न हुनेछ कि. तथापि, नोर्माण्डी को मुख्य आकर्षण को एक अविश्वसनीय वास्तुकला छ. क्षेत्र साँच्चै कल्पनाले कब्जा गर्ने आश्चर्यजनक कहानी सहर घर छ. को प्राकृतिक सुन्दरता यी व्यस्त सहर संग मिश्रणों को श्रद्धा थुप्रै पातहरु कि. कारण यी तस्वीर सिद्ध स्थानहरू को अविश्वसनीय लोकप्रियता गर्न, एक ट्रेन सेव सँगै सूची को राख्नु भएको छ5कहानी सहर नोर्माण्डी मा भ्रमण गर्न. तिनीहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास तपाईंको यात्रा तपाईं यात्रा गर्दै छन् अर्को समय फ्रान्स मार्फत.
Honfleur यो सूची मा सबै भन्दा प्रसिद्ध शहर हुन सक्छ. धेरै पर्यटकहरू यस उत्कृष्ट बन्दरगाह शहरको भ्रमण गर्छन् र यसले प्रदान गर्ने सबै थोकको मजा लिन्छन्. यसलाई आफ्नो अग्लो लागि अद्वितीय र चिन्न पनि छ, साँघुरो, र रंगीन भवन. यो वर्ष भर धेरै कलाकारहरूको एउटा प्रेरणा रूपमा सेवा गरेको, र अद्वितीय र रंगीन भवनहरु धेरै चित्रहरु मा कब्जा गरेको छ. तपाईं एक कृति मा कदम जस्तै Honfleur गल्लीहरूमा मार्फत एक पैदल महसुस निस्कनु हुनेछ. It will undoubtedly enchant you.
Les Andelys तपाईं एक quintessential फ्रान्सेली सहरमा आवश्यक सबै छ. आकर्षक शहर सही Seine नदी छेउमा छ. एउटा सुन्दर नदी गर्न निकटता बाहेक, Les Andelys पनि सुरम्य हरियो पहाड र सेतो पत्थर भीर चारैतिर छ यो. Les Andelys तस्वीर सिद्ध छ, जो किन धेरै आगंतुकों यो शानदार शहर को फोटो र यसको आसपास परिदृश्य सयौं स्न्याप कारण छ.
यसको सौन्दर्य बाहेक, Les Andelys पनि यसको 12 औं शताब्दीमा महल लागि प्रसिद्ध छ. महल, CHATEAU Gaillard, घर एक पटक थियो रिचर्ड को Lionheart. जबकि महल अब भग्नावशेष मा हुन सक्छ, कि माथि चट्टानी ब्लफ चढ्नु आफ्नो प्रभावशाली आकार र अझै पनि गठन Impress आगंतुकों यसलाई हेर्न.
Giverny सबैभन्दा क्लाड Monets घर लागि जानिन्छ. Claud Monet आफ्नो परिवार संग 1880s मा सम्पत्ति भाडामा. वर्षौंदेखि आफ्नो भाग्य राम्रो लागि गरिएका, र उसले धेरै समृद्ध भयो. पछि, उहाँले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्षम थियो, साथै वरपरका मुलुकमा केही रूपमा. Monet त्यहाँ एक स्टूडियो निर्माण र धेरै सिर्जना आफ्नो काम कि सम्पत्ति मा, जो नक्सामा Giverny राख्न. Giverny आवास अलग्गै को Monet को रुचि, यसलाई अन्य इंप्रेशनिस्ट कलाकारहरूको घर पनि थियो. यी क्लाड Cambur समावेश, CHRISTOPHE Demarez, र Ramier. धनी इतिहास कला प्रेमीहरूको जीवनमा अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ कि धेरै मा ड्र र यी अविश्वसनीय कलाकारहरूको काम गर्दछ.
शहर प्रभावशाली कलात्मक इतिहास साथै, शहर पनि यसको सुरम्य दृश्यहरु लागि प्रसिद्ध छ. यो मुख्य कारण कलाकारहरूको एक यो प्रेम थियो. त्यही आकर्षण आज धेरै आगंतुकों मा ड्र. आकर्षक देश कटेज, सुरम्य उद्यान, र जीवंत प्राकृतिक माहोल एक हेर्न पर्छ छन्. Make sure to stop by Giverny if you are ever in the Eure region of Normandy.
नोर्माण्डी Cotentin प्रायद्वीप को पूर्वोत्तर भाग मा Barfleur को सुन्दर तटीय शहर निहित. मात्र बारे यस शान्त माछा मार्ने शहर 700 बासिन्दा भन्दा यसको आश्चर्यजनक सौन्दर्य लागि जानिन्छ. यसलाई आधिकारिक फ्रान्स सबैभन्दा सुन्दर सहर रूपमा घोषणा गरिएको थियो. यो प्लस सुवेश गाउँ डे फ्रान्स को शीर्षक सम्मान थियो, and it is clear to see why.
Barfleur कुनै अन्य जस्तै मणि छ. को सुरम्य वातावरण र विशाल समुद्र दृश्य बाहेक, यो पनि घर हो ऐतिहासिक वास्तुकला. पहिले, सडकमा आफूलाई cobbled छन् र एकदम पुरानो. दोश्रो, 16 औं शताब्दीमा धेरै पुरानो घरहरू मिति फिर्ता. शहर मा पुरानो घर भन्दा धेरै अगाडी फिर्ता जान्छ. को सैंटे क्याथरीन चोकमा, तपाईं मिति मध्य युग फिर्ता गर्ने एक घर हेर्न सक्नुहुन्छ. यो एक प्रवेश छ, बाह्य सीढी, र mullioned Windows. Barfleur एउटा सानो शहर छ हुनत, यो छ एक यात्रा लायक if you are in the area.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 कहानी शहरहरू भ्रमण मा नोर्माण्डी” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-towns-visit-normandy%2F – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Fairytaletowns frenchtowns नोर्माण्डी रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह travelfrance traveltips